Trump oo Congress hor geeyay nin Kuuriya Waqooyi u dhashay. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Trump oo Congress hor geeyay nin Kuuriya Waqooyi u dhashay.
Qisada murugada leh ee ninkan baxsadka ah ee u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa qeyb ka ahayd bandhiga Trump ee hadal jeedintiisii koowaad ee Aqalka Congress-ka .
Ji Seong-ho ayaa u gacan haadiyay taageerayaashiisii u sacbinayay.
Balse maxay tahay sheekada ninkan ku saabsan?
Waa kumaa Ji Seong-ho?
Dad yar ayaa horey u maqlay markii Donald Trump uu sheegay magaca Ji Seong-ho.
“Sanadkii 1996, Seong-ho ayaa ahaa mid macaluul ay haysato gudaha Kuuriyada Wuqooyi,” ayuu hadalkiisa ku billaabay Mr Trump, isaga oo doonayay in uu qeexo dhibaatada uu soo maray Mr Ji markii uu dhalinyarada ahaa bartamihii 1990 xilligaasi oo Kuuriyada Wuqooyi ay macaluul ka jirtay.
Sanadkaas Mr Ji isku dayay in uu xado dhuxul si uu cunno ugu badasho.
Waxaa u suuragashay in uu soo xamaarto, balse wuu miir daboolmay taasi oo ay ugu wacnayd gaajo aad u daran oo haysay.
Waxa uu sheegay in uu kacay ka dibna uu ku dhacay meel u dhaw waddo uu tareenka maro markaasi oo uu tareen lugta ka jiiray.
Wuu ka badbaaday shilkaasi balse gacantiisa bidix iyo lugta ayaa dhibaato ka soo gaartay.
Mr Ji ayaa loo qaaday isbataalka waxana lagu sameeyay qallliin isaga oo aan la siin daawadda gabuubisada ee la siiyo marka qofka la qalayo.
Qalliinkan ayaa waxa uu qaatay 4 saac iyo bar.
Ninkani oo ka soo goostay Kuuriyada Wuqooyi aya mar ka sheekeeyay dhibaatadan soo martay.
“Aad ayaan u qeylinayay , qeylidaydana waxa ay ahayd mid la mid ah qeylada filimaanta dagaalka,” waxaa uu sidaa u sheegay koox xuquuqda aadanaha ah, waraysigaasi oo lagu daabacay wargayska The Guardian.
“Ma jirin cid caawisay.”
Qaabkuu uga soo baxsaday Kuuriyada Wuqooyi?
Sanaddii 2000, Mr Ji waxa uu go’aansaday in uu ka tallaabo xadka dhanka Shiinaha si uu u raadiyo cunno waxa uuna ka gudbay goob buuralay ah .
Balse markii uu soo laabtay, waa la xiray waxaana jirdil u gaystay xukuumadda Kuuriyada Wuqooyi.
Waxa ay ahayd 2006 markii uu ugu dambayntii si buuxda ay isaga iyo walaalkii uga soo baxsadeen Kuuriyada Wuqooyi.
Waxa ay ka soo gudbeen wabiga Tumen oo ku yaalla Shiinaha, iyada oo Mr Ji uu ka baqayay maadaama uu naafo yahay in isaga iyo walaalkiis la qabto.
Mr Ji oo dad kale caawin ka helaya ayaa ugu dambayntii soo gaaray Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo ay walaalkii ku midoobeen.
Wiilashani ayaa markii dambe waxa ay isku dayeen in ay la xiriiraan aabahood oo ku sugnaa magaalada Hoeryeong ee Kuuriyada Wuqooyi.
Sida laga soo xigtay wargayska The Freedom Collection oo waraysi la yeeshay waxa ay doonayeen in markii ay dageen Kuuriya Koonfureed aabahooda ay soo kaxeeyaan , balse wuu ku guuldaraystay in uu soo baxsado.
Waxaa aabahood qabtay dowladda Kuuriyada Wuqooyi oo jirdil u gaystay ilaa uu ka dhinto.
Muxuu hadda qabtaa?
Maanta oo Mr Ji ay da’diisu tahay 36 jir waxa uu ku nool yahay magaalada Seoul halkasi oo uu dadka ka soo baxsanaya Kuuriyada wuqooyi uu gacan ka siiyo sidii ay u baxsan lahaayeen.
Waxa uu asaasay hay’ad u dooda xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Now, Action, Unity, taasi oo samaysa wacyigalin ku aadan xaaladda ay ku nool yihiin dadka Kuuriyada wuqooyi.
Waxa Mr Ji khudbad ka jeediyay shirar caalami ah oo uu ka mid yahay shirkii Oslo ee golaha xorriyadda 2015, waxa uuna ka jeediyay khudbad uu ugu magacdaray “Ka soo baxsashadeydii aan suuragalka ahayn ee Kuuriyada Wuqooyi “.
← Maamulka Hirshabeelle oo bilaabay howlgalo lagu furayo jidadka xiran ee labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
Daraasad BBC: Taalibaan waxay halis ku yihiin 70% dalka Afqaanistaan →